कोरोनाबाट बच्न गुर्जो कति प्रभावकारी ? विज्ञको यस्तो सुझाव - Nepal Page Nepal Page
कोरोनाबाट बच्न गुर्जो कति प्रभावकारी ? विज्ञको यस्तो सुझाव
काठमाडौं, २८ असोज । नेपालमा संक्रमणको दरपनि बढ्दै गएको छ । विश्व कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अस्तव्यस्त छ । विश्वभरका वैज्ञानिकहरु यसको औषधि र भ्याक्सिनको खोजिमा छन् । तर अहिलेसम्म कुनै तात्विक परिणाम आउन सकेको छैन । त्यसैले कोरोना संक्रमणसँग बँच्नको लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास हुनु नै अहिलेको उपयुक्त उपाय मानिएको छ ।
विश्वभरका वैज्ञानिकहरु यसको औषधि र भ्याक्सिनको खोजिमा छन् । तर अहिले सम्म कुनै तात्विक परिणाम आउन सकेको छैन । त्यसैले कोरोना संक्रमणसँग बँच्नको लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास हुनु नै अहिलेको उपयुक्त उपाय मानिएको छ । मानिसहरुले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने घरायसी जडिबुटीप्रति चासो बढाउँदै गएको देखिन्छ । त्यसैमध्येको एक हो पछिल्लो समय नेपालमा प्रचलनमा रहेको गुर्जो । नेपालमा अहिले गुर्जोको प्रयोग बढेको छ । हरेक पसलमा गुर्जो विक्री गर्न राखिएको पनि देखिन्छ ।
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने घरायसी जडिबुटीप्रति चासो बढाउँदै गएको देखिन्छ । त्यसैमध्येको एक हो पछिल्लो समय नेपालमा प्रचलनमा रहेको गुर्जो । नेपालमा अहिले गुर्जोको प्रयोग बढेको छ । हरेक पसलमा गुर्जो विक्री गर्न राखिएको पनि देखिन्छ । विज्ञ डा ऋषिराम कोइराला पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकासका लागि गुर्जो प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने बताउँछन् । गुर्जो दैविक कालदेखि नै उल्लेखित जडिबुटी भएको र पछिल्लो समय वैज्ञानिक रुपमा अध्ययन गरिएका तथ्यहरुले पनि प्रमाणित गरिसकेको बताए ।
रगतमा हुने हेल्परटिसियल्सहरुको क्षमता बढाउने र शरीरमा हुने एन्टीजिन प्रोसेसलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गर्ने गुण गुर्जोमा हुने उनले बताए । गुर्जोको प्रयोग धुलो बनाएर वा उमालेलर खान सकिन्छ । डा कोइरालाका अनुसार हरियो गुर्जो छ भने सानो एक टुक्क्रालाई थिचेर पानीमा उमालि छानेर चिया जस्तै खान सकिन्छ भने सुकेको गुर्जो भए धुलो बनाई पानीमा घोलेर वा त्यतिकै पनि एकचम्चा सम्म खान सकिन्छ । कोभिड १९ संक्रमणसँग लडनका लागि पनि गुर्जो प्रभावकारी हुने उनले बताए । त्यसैले कोभिड संक्रमण भएका मानिसहरुले समेत दिनमा दुई तीनपटक सम्म खानसक्ने उनको भनाइ छ ।
रुस,२९ असोज । रुसले नयाँ केरोना भाईरस कोभिड १९ भ्याक्सिनलाई प्रयोगको अनुमति दिएको छ ।
काठमाडौं, २२ असोज । दृष्टिप्रतिको आशा, विश्व दृष्टि दिवस मनाऔँ’ भन्ने नाराका साथ अक्टोबर ८
छाला सुन्दर चम्किलो र तौल घटाउनका लागि कफी, अन्य ५ फाइदा
काठमाडौं, १७ असोज । विश्वमा अक्टोबर १ लाई ‘विश्व कफी दिबस’ को रुपमा मनाइन्छ ।
कुन खाने कुरामा कस्तो पाईन्छ पोषक तत्व ?
शरीर संचालन एवं जीवित रहनका लागि विभिन्न पोषक तत्वको खाँचो हुन्छ । त्यस्ता अधिकांश पोषक
काठमाडौं, ५ असोज । गलकोट नगरपालिकाले महिलालाई महिनावारीको समयमा आवश्यक पर्ने सेनेटरी प्याड तथा झोला
कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न ‘गुर्जो’को रस फाइदाजनक
काठमाडौं, ५ असोज । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढेसँगै तनहुँ जिल्लामा गुर्जो सेवनप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको
यसरी गर्न सकिन्छ स्वास्थ्यसम्वन्धी भविष्यवाणी
वासिङ्टन, २८ भदौ । रगतमा रहेको भिटामिन ‘डी’ को तहका आधारमा स्वास्थ्यको भविष्यवाणी गर्न सकिने